भद्धगोल , हर्के हवलदार, सक्किगोनी काम गरेका चर्चित हाँस्य कलाकार सुबोध गौतम ‘एकदुमे’का पिताको निधन « गोर्खाली खबर डटकम
भद्धगोल , हर्के हवलदार, सक्किगोनी काम गरेका चर्चित हाँस्य कलाकार सुबोध गौतम ‘एकदुमे’का पिताको निधन
२०७७ असोज ५ गते सोमवार प्रकाशित
काठमाडौं-चर्चित हाँस्य कलाकार सुबोध गौतमका पिताको निधन भएको छ । गौतमका पिता शिवकुमार गौतमको आईतबार ६२ वर्षको उमेरमा आफ्नै निवास ओखलढुंगाको कुन्तादेविमा निधन भएको हो ।उनी लामो समय देखी दमको रोगी भएको बताइएको छ ।
दमका कारण स्वास्थमा थप सास्या आएपछि उनलाई उपचारको लागि सामुदायिक मिशन अस्पताल सोब्रुमा दुई हप्ता राखेर स्वास्थ्यमा केही सुधार आएपछि घर फकाइएको थियो । घर फकाइएको २० दिनपछि उनको निधन भएको बताइएको छ ।
करिव पन्ध्र बर्ष अघिदेखि हास्य क्षेत्रमा लागेका गौतमले हर्के हवलदार, भद्धगोल, सक्किगोनी लगाएत आधा दर्जन टेलिसिरियलमा अभिनय गरेका छन । गौतमले भद्धगोल र सक्किगोनिमा प्रयोग गरेको थेगो एकदुमसंगले हाल निक्कै चर्चामा छ ।
यो पनि , २१ दिन लाग्यो डाक्टर भोला रिजाल दम्पत्तीले कारोनालाई जित्न- काठमाडौँ । बरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर भोला रिजालले कारोनालाई जितेर घर फर्किएका छन् । कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएपछि राजधानीको हेम्स अस्पताल भर्ना भएका डा रिजाल र उनकी पत्नी सरला अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् ।
बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री उर्वशी रौतेलाको लेहेंगा र गहनाको मूल्य सॉच न नसक्ने!!
पत्याउनुहुन्छ ? एउटा औँठीको मूल्य ३३ करोड रुपैयाँ !